Fanovana entin’ny Filoham-pirenena : Omena ny sata sahaza azy ny fokontany izay akaiky ny mponina -
AccueilRaharaham-pirenenaFanovana entin’ny Filoham-pirenena : Omena ny sata sahaza azy ny fokontany izay akaiky ny mponina
30/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Miainga eny amin’ny fokontany izay akaiky ny mponina ny zava-drehetra. Amin’ny lalàm-panorenana misy ankehitriny dia tsy rafitra demokratika ny fokontany fa ny kaominina, ny faritra ary ny faritany no nomena fahefana any amin’ny andininy fahatelo. “Vonona aho hiroso amin’ny fanavaozana tanteraka ny fitantanana miainga eny ifotony. Any amin’ny biraom-pokotany 18000 mahery no tokony hiainga ny fandaminana rehetra. Azo dinihina ny loharanom-bola ahafahan’ny fokontany mivelona”, araka ny fanamarihana nentin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Maro tamin’ireo mpitondra teo aloha no nanahy tamin’ny hahavoatohintohina ny fahefan’ny Filoham-pirenena sy ny mpitantana foibe io raha omena ny sata sahaza azy ny fokontany. “Ny fahefana fototra ho an’ny mponina no omena azy ireo” hoy ihany ny Filoha. Amin’ny ankapobeny tokoa dia ny fokontany no mahita sy mahatsapa ny zava-misy iainan’ny mponina sy manakaiky azy ireo. Mahatsapa izany ny fitondrana ankehitriny, ary nametraka ny Filoham-pirenena fa “ tsy azo hiodivirana intsony ny fanavaozana eny ifotony hamongorana izao savorovoro-piarahamonina rehetra izao. Tsy maintsy omena ny fahefana tandrify azy ny fokontany … Ahasoa ny Malagasy izany”, hoy ihany izy. Rehefa atao tokoa ny fandinihina, dia eny anivon’ny fokontany no ahitana ireo tranga samihafa toa ny tsy fandriam-pahalemana, fitsaram-bahoaka, tsy fifankahazoana samihafa, ny mpangalatra tany… “Tsapa anefa fa samy maka ho azy ny fiarahamonina ankehitriny. Very ilay trano atsimo sy avaratra, ary anaran-tsy very sisa ny fivoriambem-pokonolona fa tsy mahatapaka ahitra, izay mitaky fandaminana ao anatin’ny famerenana ny soatoavina sy ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny tantarany, ny taniny, amin’ny tontolo iainana mba ho tompon’andraikitra feno”, hoy hatrany ny Filoha. Rehefa mahazo ny fahefana tandrify azy ny fokontany, dia tsy hiandry baiko avy amin’ny kaominina, na distrika intsony amin’ny fandraisana andraikitra manoloana ny zava-misy eo amin’ny fokontany. Ohatra nomen’ny filoha tamin’izany ny firongatry ny Pesta noho ny fisian’ny tsy fahadiovana vokatry ny tsy fandraisana andraikitra.
Sehatra iray ahafahan’ny firenena mandroso ny lafin’ny fampihavanana, izay takian’ny sehatra iraisam-pirenena mialoha ny fifidianana. Efa mipetraka ankehitriny ny komitin’ny fampihavanam-pirenena, izay tsy tokony hionona fotsiny amin’ny fampihavanana ireo mpanao politika. “Eny amin’ny fokontany no heveriko fa tokony hanombohana ny fampihavanana. Ka tokony hiroso isika amin’ny famolavolana ny lalàna raikitra hifehy ny fokontany”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.